Germany: Geerida Helmut Kohl, R/Wasaarihii xilligii dib-umidayntii 2dii Jarmal – Kasmo Newspaper
Germany: Geerida Helmut Kohl, R/Wasaarihii xilligii dib-umidayntii 2dii Jarmal
Updated - June 16, 2017 5:04 pm GMT
London (Kasmo), Magaalada Ludwigshafen ee dalka Jarmalka waxaa maanta ka geeriyooday Helmut Kohl, Ra’iisal Wasaarihii hore, uguna muddada dheeraa intii ka dambaysay dagaalkii 2aad ee Dunida, da’diisuna waxay ahayd 87 sano.
Kohl wuxuu ahaa hoggamiyihii Xisbiga CDU, “Christian-Democrat”, (1973-1998), ee Jarmalkii Galbeed, markii dambana hoggaanka isla xisbigaas, Jarmalka oo midaysan Bariga iyo Galbeedka.
Wuxuu taariikhda ku galay dib-umidayntii 2dii Jarmal, 3dii Oktoobar 1990kii, oo ku beegnayd 1 sano ka dib dumintii gidaarkii Berlin, 19kii Nofember 1989kii, taas oo soo afjartay kala qaybsanaantii Jarmalka ee soo taxnayd tan iyo burburkii Rejiimkii Hitler ee dhammaadkii dagaalkii 2aad ee Dunida.
Kohl wuxuu xilka hayay 1 Oktoobar 1982 ilaa 27 Oktoobar 1998, qiyaastii 16 sano oo sigay in ay gaarsiiso “Record”-kii hoggaamiyihii Jarmalka, Bismarck, oo 19 sano ahaa.
Waxaa kale oo maamulkiisii loo tiriya ka samata-bixii dagaalkii qaboobaa, in uu isaga iyo Madaxweynihii Faransa, Mitterrand, ka dambeeyay hirgalinta heshiiskii “Maastricht Treaty” ee Febraayo 1992kii, kaas oo horseeday abuuray curashada lacagta Euro.
Sawirrada lagu xasuusto waxaa ka mid ah midka “Qabuuraha Verdum”, (Fransa) ee askartii Jarmalka iyo Faransiiska ee dagaalkii 1aad ee Dunida, oo isaga iyo Madaxweynihii Faransa, Francois Mitterand oo gacmaha is haysta ay wada galeen.
Markii doorashooyinkii looga adkaaday, sannadkii 1998kii, jabkiisa waxaa isa sii raaciyay fadeexado lacageed oo xisbigiisa lagu maalgaliyay, markii dambana uu isagu qirtay in uu ku lug lahaa.
Muddooyinkii u dambeeyay noloshiisa wuxuu ahaa nin curyaamay oo kursi saaran, dhaawac ka soo gaaray meel uu ka soo dhacay aqalkiisa darteed, wuxuuna la noolaa xaas 2aad oo isaga 34 sano ka yarayd, kana dambaysay middii ka geeriyootay 2001gii.